HomeArimaha QoyskaU Gaar Ah Dumarka: Sababha Dumarka Ku Qasabta In Ay Horay U guursadaan.
Guurka wakhtiga hore ah ayaa leh taageerayaal badan oo Ragg & Dumar ah Mararka qaar dumarka ayaa doorta in ay horay u guursadaan iyaga oo aan ka laba-labayn in ay ka fikiraan in ay wakhti hore guursadaan.
Inkasta oo ay khubarada iyo waliba cilmi baadhayaashu dumarka uga digaan khatarta ay Dumarka u leedahay guurka wakhtiga hore hadana dumarka qaar ayaa doorta in ay wakhti hore guursadaan waxana aan halkan ku soo bandhigi doonaa sbaabaha dumarka ku riixa guurka wakhtiga hore ah.
1.Ka Baxsiga maamulka Waalidka Gaar Ahaan Aabaha:
Qaar ka mid ah qoysaska Aabaha ayaa ah Nin adag oo leh go’aano adag oo si xoogan u xakameeya ubadkiisa gaar ahaan dumarka oo ku dadaalaan in ay noqoto gaabdh Edeb leh waliba sidoo kale leh dhaqan fiican.
Ilaalintaas iyo maamulistaas adag ayaa keenta in ay gabdho badan iyaga oo aan gaadhin masuuliyad guur ku deg-dega in ay guursadaan si ay u hesho xoriyad waliba noqoto qof ka madax banaan Aabeheed.
2.Rabitaanka Helista Caruur:
In ay hesho Caruur iyada oo gabadh da’yar ah ayaa ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee ay dumarku wakhti hore u guursadaan si ay u hesho caruur ayna aad uga weynayn si ay ula noqoto saaxiib wax walbana ugala tashadaan.
3.Booska Gabadha Ee Guurka:
Gabadha ayaa mararka qaar ka fikirta doorkeeda guurka marka ay maqasho ama Aragto gabadh kale oo guursatay waliba noqday xaas waliba qaaday masuuliyad badan oo bulshada ah.
4.Xaalad Dhaqaale Oo Xun Oo Dhanka Qoyskeeda Ah.
Dumarka ayaan u dul qaadan karin xaalada xun ee dhaqaale ee uu qoyskeedu ku jiro waxana ay sabab u noqotaa in ay ka fikirto waliba ku dhaqaaqdo guur inkasta oo ayna gaadhin wakhti masuuliyad lagu qaado waxana ay arintaas u qaadaysaa sidii ay u gacan qaban lahayd qoyskeeda iyada oo adeegsanaysa dhaqaalaha Ninkeeda.